Madaxweynaha cusub ee dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia oo difaacay madaxweynihiisii hore Cabdi Maxamuud Cumar. | puntlandi.com
Madaxweynaha cusub ee dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia oo difaacay madaxweynihiisii hore Cabdi Maxamuud Cumar.
Jigjiga (Puntlandi) Madaxweynaha cusub ee dowlad degaanka Soomaalida, Axmed Cabdi Maxamed, ayaa si adag u beeniyay warar lagu faafiyay warbaahinta oo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia, Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka isku dhajiyay kahor inta aanu is casilin.
Axmned Cabdi Maxamed ayaa sheegay, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar inuu si iqtiyaartiisa ah oo rabitaan ku jiro uu xisbigiisa ugusoo bandhigay inuu iscasilayo, kadibna xisbiga ayaa ka aqblay, istiqaalada isagoo eegayay daruufaha xilligaan jira.
“Waxa meesha ka dhacay waxay ahaayeen xil isweydaarsi ku dhacay si nabad galyo ah. Dadbaa waxay dhahayeen, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar xilka ayuu isku dhajinayay, waxaanse u sheegaynaa, madaxweynuhu ma jeclayn kursiga ee wuxuu jeclaa shacbigiisa, inaa og, inagaa marqaati ka ah,” ayuu yidhi madaxweyne Axmed.
Madaxweynaha ayaa cusub ayaa caddeeyay inaanu waxba iska badelin nidaamkii ka jiray dowlad degaanka, wuxuuna xisbigiisu ugu baaqay inay isku duubnaadaan.